ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ခပ်သိမ်းသောအရာကိုအရွယ်ရောက်? ငြီးငွေ့ရှိဂိမ်းအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးအာကာသအမှန်တကယ်ကိုက်ညီသည်အဘယ်အရာကိုသင်တို့အဘို့အရှာဖွေနေပါတယ်? ထို့နောက်အဘယ်သူမျှမကနောက်ထပ်မကွညျ့! ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကရှိပြတိုက်တစ်ခု၏အကောင်းဆုံးစုဆောင်းမှု၏ညမ်းခေါင်းစဉ်ကပတ်ပတ်လည်အခြေအရွယ်ရောက်နယ်ပယ်နှင့်သင်ချစ်ကြတာပေါ့အလာအတွက်အရိွန္ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်စုဆောင်း။ မဲအကြောင်းမျှမအမှား:ဤတစ်ဖြစ်ပါသည် ၁၀၀%သီးသန့်ချာကိုထုတ်လုပ်သောအရာအားလုံးအိမ်-နှင့်မခွင့်လိုင်စင်ရုပ်ထွက်။ ရိုးရှင်းစွာကိုထား၊သင်ချင်တယ်ဆိုရင်အားကစားဘာရွယ်ရောက်လိင်ဂိမ်းများကိုဆက်ကပ်ဖို့ရှိပါတယ်၊သင်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက်ထိုသို့ပြု!, ကိုသတင်းကောင်းအမှန်တကယ်၊တက်လက်မှတ်ထိုးလက်ရှိတာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့နှင့်ကျွန်တော်အစီအစဉ်စောင့်ရှောက်ရန်လမ်းကိုအစဉ်အမြဲ။ မှန်တယ်:သင်မည်မဟုတ်ပင်လိုအပ်လက်ကျော်တစ်ပြားမှနိုင်ရန်အတွက်ဝင်ရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းအရာ။ ကျနော်တို့ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချကြောင်းအရည်အသွေးကိုကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်းအောင်မြင့်၊သင်ပါလိမ့်မယ်ပတ်ပတ်လည်ကပ်အဖြစ်အမြန်ဆုံးထိတွေ့ခဲ့တာငါးမိနစ်များအတွက်! ဒါကြောင့်၊သင်မည်သို့အကြောင်းရပ်တန့်အချိန်ဖြုန်းနဲ့ဖန်တီးဖို့အခမဲ့အကောင့်ကိုရွယ်ရောက်လိင်ဂိမ်းများအခုအချိန်မှာ? အပေါ်ကလာပါ–သင်သိချင်မြင်င့်အဘယျသို့သင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေအခြားဘက်ခြမ်းအပေါ်!
ကတည်းကမရှိရိုးရှင်းတဲ့ရှင်းပြချက်၏အရွယ်ရောက်လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်တစ်ခုလုံးအများအပြားကွဲပြားခြားနားတဲ့လူတွေကိုများကဲ့သို့ကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်မှုမှနယ်ပယ်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကသိမှစတင်ခြင်းစီမံကိန်းအကြောင်းမှာဖြစ်ဖို့ရှိသည်အဖြစ်ကွဲပြားအဖြစ်တတ်နိုင်သမျှ။ ရလဒ်အနေနှင့်၊ဤနည်းလမ်းများထောက်ပံ့ဖို့လက်လှမ်းမိတ်ဆွေချင်သောငါတို့၏ဂိမ်းအတွက်ကျယ်ပြန့်သည်မြတ်စွာဘုရား၏အကြောင်းအရာ။ သာအခြေခံနယ်ပယ်အရွယ်ရောက်အရေးယူညီ၊သင်မူကား၊ရှာတွေ့သွားအမျိုးအစားများ၏ခေါင်းစဉ်အတိအကျတူညီပါတယ္။ ပြောခံုးခေါင်းစဉ်၊အရေးယူ RPGs၊ချိန်းတွေ့ simulators နှင့်အကြား၌ရှိသမျှကို။, အခုအချိန်မှာ၊ထိုစာကြည့်တိုက်၏ဂိမ်းများဒီမှာထိုင် ၂၂ ခေါင်းစဉ်၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အစီအစဉ်ကိုထည့်ရန် ၁ အသစ်လွှတ်ပေးရန်တိုင်း၊၂ လအတွင်းတော့ထိုအရေအတွက်သွားရတဲ့စတင်ရန်တို့သည်ကြီးတွေတော်တော်လေးမင်းအမကြာမီ! ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အားလုံးကိုဖုံးလွှမ်းအခြေစိုက်စခန်းမှကြွလာသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းများ၊သို့သော်သင့်ကိုတွေ့လျှင်အကြောင်းကျနော်တို့ချို့တဲ့ကြောင်းအရာတစ်ခုခုသင်ချင်ပါတယ်၊ကျေးဇူးပြုဖို့သေချာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်နှင့်ကျွန်တော်မြင်ရပါလိမ့်မယ်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကလုပ်နိုင်! မှာထိုနေ့၏အဆုံး၊ဤအရပ်သည်ကပေးအပ်အကြောဂိမ်းကစားအတူထွက်ရှိပါတယ်အကုန်စည်ကြောင်းသူတို့ရှာ။ ကျွန်တော်သက်သေပြဖို့သောသင်တို့ဒီအကြောင်းကိုအားလုံးပရိသတ်များနှင့်အခြားမဟုတ်–ပဲကျွန်တော်တို့ကိုပေးဖို့အခွင့်အလမ်းပြပွဲ!
သေချာအောင်ဖို့လိုသူမည်သူမဆိုသို့ကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်းသို့သွားရောက်နိုင်ကိစ္စရပ်မပါဘဲ၊ငါတို့သည်သင်တို့အလိုအကုန်သင်ရှေ့ဆက်အချိန်သိသောသူအပေါင်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အင်တာနက်ကနေတဆင့်။ ဒီကိုဆိုလိုသည်သင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးအခြားမည်သည့်ဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်ပြည်တွင်းမှာ–ကိုယ့်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးနိုင်ပါလိမ့်မယ်ပြေးဖို့အရာအားလုံးအားဖြင့်။ ယခု၊အထောက်အပံ့ပေးအပိုင်း-မကြာသေးမီဗားရှင်း၏မြေခွေး၊Chrome၊ရှုနှင့်အော်။ သီအိုရီအတွက်၊အားလုံးဘြတ္ဒဏ်ငွေဖြစ်သင့်၊သို့သော်ဤအကြောင်းတရားဝင်အထောက်အပံ့နှင့်ကြောင်းအကြံပြုအသုံးချထက္အားလုံးအခြားသူများ။, ဒါဟာလာမယ့်အချိန်ကြာမြင့်စွာကတည်းမှကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းသည်အဘယ်မှာရှိ၊သို့သော်ကျနော်တို့ကအမှန်တကယ်ဟုယုံကြည်ထိုရာက္ဇာချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးသောထောင့်အဘို့အသွားနိုင်ပါတယ်။ တသပ်သပ်ရပ်ရပ်အနည်းငယ်သာအကျိုးရှိ၏၊ဤလမ်းကြောင်းကိုဆင်းသောအချက်ဖြစ်ပါသည်ကစားနိုင်ပါလိမ့်မယ်အဆိုပါဂိမ်းအကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့၏မော်ကွန်းတိုက်မှတိုက်ရိုက်သင့်မိုဘိုင်းဖုန်း။ မှန်–ပဲဝန်သူတို့ကိုသင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာသင်မွေ့လျော်နိုင်ပါလိမ့်မယ်၊ရွယ်ရောက်လိင်ဂိမ်းများ! သင့်ရဲ့ကယ်တင်နှင့်တိုးတက်မှုအားလုံးထပ်တူကျလွန်း၊ဒါကြောင့်ဖြစ်သင့်မဖြစ်မည်သည့်အရေးကိစ္စများနှင့်အတူချောမွေ့စွာကူးပြောင်းနှစ်ခုအကြား။, ဒါကြောင့်၊သင်ကအပေါ်တစ်ဦးခုံတန်းလျားတစ်ပန်းခြံကစားဒီညမ်းဂိမ်းသို့မဟုတ်ပဲအိမ်မှာအပေါ်သင်၏အဓိကတူး–ဒီချာသင်ဖုံးလွှမ်းလျက်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အချို့!
လူသားများသည်အမြင်အာရုံသတ္တဝါ:အထူးသဖြင့်အခါ၊ဒါကြောင့်လိင်မှကြွလာသော! ဘရင်းနှီးမြှုပ်နှံတွေအများကြီးအချိန်၊အားထုတ်မှုနှင့်စွမ်းအင်သို့သင်ပေးခြင်းကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းဂရပ်ဖစ်။ ပြောရင်မျဉ်း၏ထိပ်တန်းဂိမ်းကစားခြင်းအကြောင်းကနေဖြောင့်ကြွလာညွှတ်ရေးအင်ဂျင်က။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကယုံကြည်ကြောင်းနှိုင်းယှဉ်ကြည့်သောအခါအခြားအရွယ်ရောက်ခရီးထွက်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်၊ကျနော်တို့ပတ်ပတ်လည်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုတိုင်–လျှင်မပို! ဝီ၊နောက်ကျောအဟောင်းနေ့ရက်ကာလ၌၊ရွယ်ရောက်ဂိမ်းတော်တော်ကန့်သတ်အတွက်၎င်းတို့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်သင်အချို့သောအဓိကကိစ္စရပ်များကိုနှင့်အတူထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ခြင်း-လူဝိုင်းခဲ့ကြကြောင်းတစ်ခုတည်းသောအကျင့်ကိုကျင့်အဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘက်ခြမ်း။, ကတည်းကအရွယ်ရောက်လိင်ဂိမ်းများတစ်ဦးအပြည့်အစု၏အအေးကပ်သောအသိအရွယ်ရောက်နယ်ပယ်အတွင်းထွက်၊ကျွန်တော်တို့ကျူးလွန်တဲ့အချိန်အများကြီးကိုထုတ်လုပ်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ကြည့်သောဖန်ဆင်းခေတ်သစ်လူသားများအတွက်။ ဒါကြောင့်ရပ်တန့်၊အချိန်ဖြုန်းနှင့်အတူအရပ်ကကယ်အနံ့နှင့်မသိဘူးမွတ္သားျခင္း၏နယ်ပယ်:အလာအပေါ်၌ရောက်ရ၏ထိပ်မှညမ်းဂိမ်းကစား။ ကျွန်တော်မနှင့်အတူပတ်ပတ်လည်နှင့်ပတ်သက်သောကတိတစ်ခုခုကို:ဒါဟာတရားဝင်စည်းနှောင်(အဆင်ပြေ၊မင့်၊ဒါပေမယ့်နေဆဲ)!
နေစဉ်လက်ရှိအဆင့်အတန်းများကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်းစိတ်ကူးဖြစ်ပါသည်၊အကြောင်းမျှမအမှားလုပ်ပါ:အမှုအရာသာသွားပိုကောင်းလာရန်ရေရှည်အတွက်။ ကျနော်တို့ ၂၄-လမ်းပြမြေပုံထွက်စီစဉ်ထားနှင့်အပြည့်အဝ၊၃၀၀-စကားလုံးဘလော့ဂ်ပို့စ်အရှည်ကိုအတွင်း။ ဒါဟာအမှန်တကယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တစ်ဦးဂုဏ်အသရေနှင့်အခွင့်ထူးပေးရန်ဝင်ရောက်ရန်ဤအရွယ်ရောက်ဂိမ္းပရဒိသု:ဒါကြောင့်ဘယ်လိုအကြောင်းဒါကြောင့်? သင်ကြိုက်လျှင်ထိုအသံ၏အရာအားလုံးကိုသင်ကြားဖူးတယ်ထို့ကြောင့်ဝေး၊peddle ဖို့သတ္တုနှင့်လာပုံကိုကြည့်ပါကအခြားဝက်အသက်ရှင်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မစုံလင်သော၊ဒါပေမဲ့ဝေးအဖြစ်ရွယ်ရောက်ညမ်းဂိမ္းဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုသွားပါ၊ကျနော်တို့တော်တော်နီးစပ်သူကပြောတယ်။, ဒါကြောင့်၊ငါပြုများစည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့လုံလောက်တဲ့သင်တက်လက်မှတ်ထိုးရန်? မွေ့လျော်ချင် ၂၀+XXX ဂိမ်းများဖြစ်ကြောင်းဖို့သီးသန့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်း? တူခံစားက်ပ္အပေါ်အဆိုပါအရာရှိဖက်ဆာဗာတစည်းနှင့်အတူအခြားသွေးကြော furries? ငါသေချာပါတယ်ဒါကြောင့်မျှော်လင့်!